लक्ष्मी बैंकको खराब कर्जा घट्यो,वितरण योग्य मुनाफा कति ? - Arthasansar
लक्ष्मी बैंकको खराब कर्जा घट्यो,वितरण योग्य मुनाफा कति ?
विहीबार, १५ माघ २०७७, १३ : १७ मा प्रकाशित
लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमास रिपोर्ट आज सार्वजनिक गरेको छ ।जारी रिपोर्ट अनुसार बैंकको वितरयोग्य मुनाफा ५० करोड ४६ लाख रहेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्ममा ८० करोड ७१ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ ।बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको यहि अवधीमा ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष बैंकको आम्दानी १०.६२ प्रतिशतले घटेको हो ।
दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यो शिर्षकको आम्दानी १ अर्ब ७४ करोड रहेको थियो । त्यस्तै, बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाट घटेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा समेटिएको छ।
बैंकको निक्षेप संकलन ९८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी पनि ८८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबाट बढेर ९८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्ष पुस मसान्त सम्ममा ०.८८ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा अहिले घटेर ०.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो अवधिमा बैंकको रिजर्भको आकार १२.६३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा रिजर्भमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको नाफा घटेकाले यो अवधिमा प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ । वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी १८.४१ रुपैयाँबाट घटेर १५.०९ रुपैयाँमा झरेको छ।